I-china China 3d 2.1 2.0 Wall Hanging Home Theatre System yeBluetooth engenazingcingo yeTv yesandi yebar yesandi (SP-615 nge-subwoofer) Imveliso kunye nefektri | Eyin
Inkqubo ye-China 3d 2.1 2.0 yeNdonga yokuHamba yasekhaya kwiBluetooth engenazingcingo yeTv yesandi Ibar yesandi (SP-615 ene-subwoofer)
Ukunikezelwa kwamandla: AC1 10V ~ 240V 50 / 60Hz, DC18V, 4A
Icandelo lomqhubi: 2.5 ″ × 4 + 1.5 ″ × 2 + 6.5 ″
Imveliso yamandla: 100W
Ubungakanani beMveliso: Ibar yesandi: W954 × D92 × H65MM
• Umsindo omangalisayo: Abaqhubi beRanger abane banikezela ngokumangalisayo kwisandi esiphindaphindayo. Abaqhubi beefilimu ezimbini ze-silky ze-silky banika ngokucacileyo isandi esikhethekileyo kunye nokwanda kwe-HiFi (High-Fidelity). Izibuko ezimbini zeReflex bass zonyusa ubuncwane obunzulu kwaye bunzulu.
• Ukhetho olwahlukeneyo lwezandi: Ilungelo elilodwa lomenzi lokulungisa iteknoloji yelizwi elicacileyo, nelizwi eliqaqambileyo kwimowudi yencoko yababini, nokuba kungumthamo ophantsi. Imowudi ye-Movie ikulethela amava aphuculayo kumdlalo bhanyabhanya wasekhaya.
• Unxibelelwano oluxubeneyo: Qhagamshela ngaphandle komthungo kwizixhobo zakho ngeBluetooth 5.0 ukusuka kuthi ga kwi-33 ft / 10m, ikuvumela ukonwabele umgangatho weaudiyo kwaye ulahle iingcingo okanye uqhagamshele uqhagamshelo olunentambo kubandakanya igalelo le-ARC / i-optical / i-Aux, nangaphezulu, iintambo ze-Optical / RCA ezinikiweyo .
• Eyilelwe ukuhambelana nekhaya lakho: Ibar yesandi eqaqambileyo engwevu egreyidi, ilaphu leflakisi yelaphu, uyilo olucekeceke nolunomtsalane luhleli eHarmony nendalo yakho.
Egqithileyo Ixabiso leFektri yeZithethi eziLuhlaza ze-RGB zeBluetooth yeSithethi seBattery engenazingcingo (SP-314)
Okulandelayo: I-2020 entsha yoyilo Mini yesandi esinezibane ze-RGB zeTV yeTV yeTV (600X-27)
I-RMS 80W yeNdawo yeSandi engenazingcingo engenazingcingo nge ...
Iibhola zeSandi zeTv, Izithethi zeWifi zeSandi, Ibar yesandi ye Alexa, Ibar yesandi, Ibar yesandi yeWifi yeTv, I-TV kunye ne-Soundbar Mount,